EasyJet na-efegharị na Gdansk, Poland
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » EasyJet na-efegharị na Gdansk, Poland
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Akụkọ na -agbasa ozi Poland • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ UK na -agbasa
British ụgbọ ala dị ọnụ ala dị mfe jet kwupụtara ụzọ Gdansk ya na ụzọ ọhụrụ ọ ga-aga Berlin-Tegel. Ire ere tiketi ebidola, na-agbakwunye Gdańsk dịka ọdụ ụgbọ elu 160th na network EasyJet. Ihe ụgbọelu ahụ na-ezube ijikwa ndị njem 22,000 na oge izizi mbụ. A ga-eji ụgbọ elu A319 rụọ ụgbọ elu ugboro atọ n'izu, na Tuesday, Thursday na Saturday.
Ebumnuche nke EasyJet bụ ime ka njem dị mfe ma dịkwa ọnụ ala, ụzọ ọhụrụ ahụ ga-akwalite mmepe azụmaahịa na njem nlegharị anya n'etiti obodo abụọ ahụ. Njikọ dị n'etiti Gdansk na Berlin-Tegel na-ewusi ọnọdụ EasyJet ike na Poland, na-agbakwunye Gdańsk dị ka ụzọ 19th si Poland na ọdụ ụgbọ elu 160th nke EasyJet rụrụ na Europe.
“Anyị nwere obi ụtọ maka imeghe njikọ Gdańsk ọhụrụ. Anyị ji n'aka na ụzọ ọhụrụ Berlin ga-abụ ọ bụghị naanị ewu n'etiti ndị njem si Gdansk, kamakwa ọ ga-eweta njem ndị njem si Germany, nke ga-enye aka na uto akụ na ụba mpaghara ahụ. Dị ka ụgbọ elu na-eduga na Europe, anyị nwere obi ụtọ ịkwalite netwọkụ anyị na Poland, ekele maka ụzọ ọhụrụ a, nke n'uche anyị ga-ewu ewu nke ukwuu ma nye anyị ohere ogologo oge, mmepe na-adigide ma nye ndị njem ohere ịhọrọ ebe ọzọ. , ha niile na ọnụ ahịa dị ala na nnukwu ozi. ” kwuru, sị Thomas Haagensen, Director nke easyJet.
“EasyJet’s Gdansk ntinye bu ezigbo onyinye ekeresimesi. Mgbe ụzọ anyị na-aga na Berlin si pụọ na njikọ anyị na njikọ anyị, na nzaghachi nye ọtụtụ ajụjụ ndị njem, anyị mesiri anyị obi ike na anyị ga-agba mbọ maka nloghachi ya, ma ndị na-ebu ụgbọ elu si n'ọdụ ụgbọ elu anyị, yana ndị anyị na-akpọ Gdańsk. Taa, anyị nwere obi uto ugboro abụọ - nabata otu n'ime ndị na-ebu ọnụ ala dị elu n'ụwa ma nye ndị njem anyị nkwa njikọta na Berlin. gbakwunyere Tomasz Kloskowski, Onye isi oche nke ọdụ ụgbọ elu Gdansk.
British ụgbọelu ndị na-ebu oke Christmas obodo njikọ Njikọ -eri okụrede EasyJet aku ọganihu akụ na ụba Ụzọ mbata ntinye efe efe Germany onyinye ihe mgbaru ọsọ ajụjụ Oge ntụrụndụ ezumike njem nlegharị anya ala ala-eri onye ọnụ ala dị ọnụ ala Ndị na-ebu ọnụ ala network ụzọ ọhụrụ àjà ụgbọelu atụmatụ Poland ewu ewu ọnọdụ nzaghachi nloghachi ụzọ ire ere oge n'oge okpomọkụ okpomọkụ oge adigide ibu na -adigide tariffs okwu Mpaghara tiketi ugboro okporo ụzọ ejegharị ejegharị Daysbọchị Mọnde